Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Harley-Davidson meriri nnukwu mmeri
N'ịzaghachi ọkwa nke taa sitere n'aka Onye isi ala Biden, Harley-Davidson, Inc. na-agbatị ekele ya na nchịkwa US maka iru ihe ngwọta na esemokwu 232-tarifu.
Jochen Zeitz, Onye isi oche, President na CEO nke Harley-Davidson, kwuru, sị: "Akụkọ nke taa bụ nnukwu mmeri maka Harley-Davidson na ndị ahịa anyị, ndị ọrụ na ndị na-ere ahịa na Europe. Ekele anyị na-agara Onye isi ala Biden, odeakwụkwọ Raimundo na nchịkwa US, maka mbọ ha na mkparita uka a.
"Anyị nwere obi ụtọ na nke a na-eweta njedebe nke esemokwu na-abụghị nke anyị mere, na nke Harley-Davidson enweghị ebe ọ bụla.
"Nke a bụ mgbazi usoro dị mkpa na mmekọrịta azụmahịa US-EU, nke ga-enyere anyị aka ịkwalite ọnọdụ Harley-Davidson dị ka akara ọgba tum tum kacha achọsi ike n'ụwa."
Harley-Davidson nọgidere na-agba mbọ maka ịzụ ahịa n'efu na nke ziri ezi ma na-elekwasị anya n'ịnọgide na-asọmpi n'ụwa niile maka ọdịmma nke ndị niile metụtara ya, na-ahụ na ndị ahịa ya gburugburu ụwa nwere ike ịnweta ngwaahịa ya.